Trano fandraisam-bahiny - trano fandraisam-bahinin'ny orinasa - designer architect Galati pret - Nobili Interior design, studio, architect, designer, organs, design, prices
Appartamento interieur interior - Interior design Galati
Ny ekipa noforoninay avy amin'ny Nobili Design Galati dia nanomboka niditra tao amin'ny trano famolavolan'ny atmosfera sy design conception 3d ho an'ny trano, trano, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny, hotely, toeram-pandraharahana, birao hatramin'ny 2008. Ho antsika dia tsy asa fotsiny izany, fa ampahany manan-danja amin'ny fiainana. Ny traikefantsika sy ny asa fanompoana avo dia nanampy antsika ho iray amin'ireo orinasa manana endrika malaza sy manan-danja. Hatreto, nahomby izahay namorona fialamboly maromaro ho an'ny trano sy toeram-pambolena. Nanao tetikasa 3D ihany koa izahay ho an'ny trano, trano, trano fivarotana, toeram-pitsaboana, trano fisakafoanana, trano fisotroan-dronono, pizza, kanto, ary zavatra maro hafa. Ankoatr'izany dia afaka mandamina ny efitranon'ny orinasam-panjakana izay ahafahan'ireo mpiasa mahazo aina.
Tsy misy lahatsoratra ato amin'ity sokajy ity. Raha misy sokajy eto amin'ity pejy ity, dia mety misy lahatsoratra izy ireo.
Famolavolana zava-mitranga ao an-trano any Constanta